Kooxda tifaftirka | Safarka Absolut
Absolut Viajes waa degel mareegta Actualidad Blog. Websaydhkeenu wuxuu u heellan yahay adduunka safarka dhexdeedana waxaan ku soo jeedinaynaa meelaha asalka u ah halka aan ku talo jirno inaan ku bixinno dhammaan macluumaadka iyo talooyinka ku saabsan safarka, dhaqamada kala duwan ee adduunka iyo dalabyada ugu fiican iyo hagitaannada dalxiiska.
Kooxda tifaftirka ee Absolut Viajes waxay ka kooban yihiin socdaalayaasha xiisaha leh iyo kuwa loo yaqaan 'globetrotters' noocyadooda kala duwan ku faraxsanahay inaan kula wadaago khibradooda iyo aqoontooda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto, ha ka waaban noogu soo qor foomkan.
Waxaan in kabadan 20 sano oo waayo aragnimo xirfadeed ah kulahaa aduunka dalxiiska, waa isla kuwii aan aqrinayay buugaagta oo aan booqanayay meelo aan caadi aheyn oo aduunka ah.
Anigu waxaan ahay Bachelor iyo borofisar ku takhasusay isgaarsiinta bulshada waxaanan jecelahay inaan safro, barto Japanese-ka oo aan la kulmo dadka aduunka oo dhan. Markii aan safrayo wax badan ayaan socdaa, meel walba waan lumiyaa waxaanan iskudayaa dhadhanka macaan oo dhan, maxaa yeelay aniga ahaan, safarku wuxuu beddelayaa caadooyinkeyga intii suurtagal ah. Adduunku waa cajiib oo liiska meelaha la tagayaa waa kuwo aan xad lahayn, laakiin haddii ay jirto meel aanan gaari karin, waxaan ku imanayaa qoraal.